Aabaha Dhalay Xiddiga Barca U Soo Baxay Ansu Fati Oo Shaaciyay Xulka Qaran Ee La Doonayo Wiilkiisa: "Riyadiisa Iyo Teydaba Ma Ahan Inuu Xirto Maaliyada Spain" | Laacib.net
Aabaha Dhalay Xiddiga Barca U Soo Baxay Ansu Fati Oo Shaaciyay Xulka Qaran Ee La Doonayo Wiilkiisa: “Riyadiisa Iyo Teydaba Ma Ahan Inuu Xirto Maaliyada Spain”
September 21, 2019 Balaleti Comments Off on Aabaha Dhalay Xiddiga Barca U Soo Baxay Ansu Fati Oo Shaaciyay Xulka Qaran Ee La Doonayo Wiilkiisa: “Riyadiisa Iyo Teydaba Ma Ahan Inuu Xirto Maaliyada Spain”
16 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Barcelona Ansu Fati ayaa si lama filaan ah u soo baxay xilli ciyaareedkan isagoo dhaliyay labo gool islamarkaana sameeyay caawin seddex kulan uu saftay horyaalka.
Waxay taasi keentay in Fati la gudoonsiiyo baasaboorka Spain si uu xulka Spain ugu ciyaaro Koobka Adduunka ee xulalka da’dooda ka yar tahay 17 sanno, inkastoo Barcelona aysan ku faraxsaneyn inay waayaan xiddigooda bisha October ilaa November.
Ansu Fati waxa uu ku dhashay dalka ay gumeysan jirtay Portugal ee Guinea Bissau, da’ yarkaan ayaa sidoo kale u dheeli kara xulka Portugal, laakiin waxa uu Spain ku noolaa tan iyo markii uu lix sanno jir ahaa, isagoo doortay inuu u dheelo xulka da’ yarta Spain.
Si kastaba, wareysi ay jariirada Portugal ee A Bola la yeelatay aabihiis Bori Fati, waxa uu ku sheegay in isaga iyo wiilkiisa ay riyadooda tahay inuu xirto maaliyada Portugal bedelkii uu u dheeli lahaa Spain.
“Riyadeyda waa inaan arko wiilkeyga oo u ciyaaraya Portugal, waxaana qabaa inay isaga xitaa riyadiisa tahay, laakiin haatan waa ay adag tahay” ayuu yiri Bori Fati.
“Waqti sii horeysay waxaan la hadlay agaasime ka tirsan xiriirka kubada cagta Portugal. Wadahadalkeena waxa uu ahaa mid fiican, waxaan ku balanay inaan hadalno maalintii ku xigtay. Laakiin qofkaas ima soo wicin mar kale. Ka dib markii uu kulamadaan u ciyaaray Barcelona waxa uu cadaadis xoogan inooga yimid Spain waxaa si toos ah iila soo xiriiray madaxweynaha xiriirka kubada cagta Spain.”
Ansu Fati ayaa weli dooran kara xulka Portugal xitaa haddii uu Spain u dheelo Koobka Adduunka ee U17 madaama sharciga uu u ogol yahay inuu xul bedelan karo ka hor inta uusan xulka weyn u ciyaarin kulan tartan rasmi ah.
Aabihiis Bori Fati ayaana rajeynaya in mustaqbalka uu Ansu Fati u dheeli doono xulka waa weyn ee Portugal.
“Wuxuu dareemayaa inuu yahay qof Portugal ah, aniga xitaa sidaas ayaan dareemayaa. Waa ay sahlanaan laheyd inuu u dheelo Portugal, waxaa ku filnaan laheyd in Umaro Embalo oo Benfica u dheela inuu ka dhaadhiciyo. Waa saaxiib weyn, waxa uu maalin walba la hadlaa Ansu” ayuu yiri Bori Fati.
“Wax walba waxa ay ku jiraan gacmaha Ansu. Waan ogahay inuu jeclaan lahaa inuu u dheelo Portugal. Marka uu guriga joogo waxa uu mar walba xirtaa maaliyada Portugal oo uu siiyay Umaro.”
Rekoodhka Cristiano Ronaldo Ee Laadadka Xorta Ah Oo Musiibo Ah, Maurizio Sarro Oo Masuuliyadaas Ka Wareejin Kara & Xiddiga Ugu Cad Cad Inuu Dhaxlo.